Big City Small World (Series3Episode7- Dumped?) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on September 9, 2013 at 16:16 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series3Episode7- Dumped? (အတွဲ (၃) အပိုင်း (၇) အဆက်ဖြတ်မယ်)
ဆာရာဟာ ကားလို့စ်ကို ကော်ဖီဆိုင်မှာစားဖိုမှူးလုပ်နေလို့ စိတ်ဆိုးနေတယ်။ သူ့ကိုအဆက်ဖြတ်တော့မှာလား။
Series3Episode7- Dumped? ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
နားထောင်ဦးဆာရာ။ ဘာပြဿနာလဲဆိုတာကိုငါနားမလည်ဘူး။ ငါဒီကော်ဖီဆိုင်မှာ ကူညီပေးနေရုံသက်သက်ပါ။ ခဏလေးပါ။ နောက်တစ်ပတ်ဆို တိုနီပြန်လာတော့မှာပဲ။
ငါကတော့ နင်ကော်ဖီဆိုင်သေးသေးလေးမှာ ဆန်းဒ၀စ်ခ်ျ လုပ်တာလောက်ထက် ပိုမျှော်လင့်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ထားတာ။
အေးဟုတ်တယ်။ ငါသိတယ်။ ငါပြောချင်တာက ငါတို့အားလုံးအတွက် ဆုံပြီးတွေ့ကြဖို့ နေရာကောင်းလေးတစ်ခုဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် နင် ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုလိုချင်တာလို့ ငါတွေးထားတာ။
ငါ . . . ငါမသိသေးဘူး။ . . .ပိုက်ဆံအလုံအလောက်ရှိတဲ့အခါ . . .
ဘယ်တော့ရှိမှာလဲ . . .
မသိဘူးလေ။ . . . မကြာခင် . . .မျှော်လင့်ရတာပဲ။
အေး အဲဒီအချိန်ကျရင် ငါ့ကိုသိခွင့်ပေးပါဦး။
ငါ. .ငါတွေးမိတယ်။ ငါတို့ အေးအေးဆေးဆေးဖြေရှင်းရင်ကောင်းမလားပဲ။ တို့တွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခဏလောက်မတွေ့ကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။
အိုး အေးကောင်းပြီလေ။ အိုကေ လို့ထင်တာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ . . .
ဒါဆိုသွားပြီ . . . နောက်တော့တွေ့တာပေါ့။ ဟုတ်လား
မယုံပါဘူး။ လုပ်ပါ ဆက်ပြော။
ငါ ဒီမှာလုပ်နေတာ နည်းနည်းစိတ်ကုန်လာပြီ။
အိုး ကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။ ကဲ စိတ်ထဲဘယ်လိုမှမထားနဲ့။ မင်းတို့ပြန်အဆင်ပြေချင်ပြေသွားမှာပါ။
အေး ဒီလိုပဲ မျှော်လင့်တာပဲ။
အိုလီဗီယာ! ဟိုင်း ငါတွေ့ချင်နေတဲ့မိန်းကလေးပဲ။ (တွေ့ချင်တာနဲ့အတော်ပဲ)
ပထမဆုံး နင် ငါရယ် ဟယ်ရီနဲ့ ဂျော်နီ တို့စလုပ်နေတဲ့ စီးပွားရေးအကြောင်းသိတယ်နော်။
အေး ဒါပဲ။ ငါတို့ အရင်းအနှီးထပ်လိုနေတယ်။ နင်ပါချင်မလားလို့။
ကျေးဇူးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဟင့်အင်းပဲ။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ ငါ့မှာကိုယ့်စီးပွားရေးနဲ့တင် လုပ်စရာတွေအများကြီး။
သြော် အေး . . . သောကြာနေ့ညနင်လာနိုင်မလားလို့။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်။ တစ်ခုခုသောက်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
အိုး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖာဒီ။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲ နောက်ထပ်“ဟင့်အင်း”ရမှာပဲ။ ငါ သောကြာနေ့ကျရင် ဂျိုးကိုထိန်းပေးရမယ်။
နင့်တူလေးဂျိုးလား။ အိုး သူကတော့အမြဲပဲ နော်။
ဒီမှာ နင် ငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်တွေ့စေချင်တယ် ဟုတ်တယ်မလား။
ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အလေးအနက်တော့မဟုတ်ဘူး။ အဲ သာမန်ကာသျှံကာလောက်ပဲသဘောထားကြတာပေါ့။
အိုကေ။ ဟေးကားလို့စ်။ ငါတို့နှစ်ယောက်တည်း ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်ကွ။